Autism chirwere chinokanganisa mumwe muvane zana-vana vanozvarwa nhasi. Vana vasina hushamwari, kutaurirana uye maitiro ehunhu anogona kuiswa paAutism Spectrum. Chiyero ichi chinotsanangura nzira dzakasiyana dzeatism kubva kuAsperger's Syndrome kuenda ku "standard" autism inoongororwa muzvikamu zvinotevera. Kunyangwe hosha yacho […]
Kufamba newiricheya kunogona kurova tsinga kana ukasaronga pachine nguva, kuita tsvagiridzo, kana kufunga nezve zvingangodzokera shure uye kunonoka nekuda kwekuremara kwehurema. Semuenzaniso, haisi hotera yega yega kana motel ine mukana wewiricheya, izvo zvinogona kukonzeresa matambudziko kana uchifamba wega. Ive neshuwa yekubvunza nezve wiricheya kugona paunenge uchiita hotera kuchengetedza. Avo […]
Wiricheya Ramps yeHurema Van
Kukurudzira kufamba kunobatsira kuchengetedza munhu hupenyu hwewiricheya. Maitiro acho anotanga newiricheya inofambiswa nyore nyore, ramps uye kutakurwa kwakakodzera. Mawiricheya marampu anogadzira minivan kana yakazara-saizi vani inobudirira hurema van. Kazhinji, pasi revhavha inoderedzwa neinenge 1 tsoka. Izvi zvinopa […]
Mutengo weWiricheya Van Kutendeuka
Zvinodhura zvakadii kushandura kombi? Iyi blog post ichaputsa mutengo wewiricheya van kutendeuka, saka iwe unoziva zvaunotarisira. Wiricheya van kushandurwa kugadziridzwa zvakajairika zvakanyanya. Kwete chete idzi shanduko dzakajairika asi zvakare dzinodhura muchirongwa chikuru chezvinhu. Chiverengero che […]